SLT SPORTS: Horyaalka SpainOo Xilli Ciyaareedkan U Muuqda Horyaalka Ugu Adag Qaarada Yurub Iyo Qodobo Kale. | Somaliland Today
← Duuliyayaasha Diyaaradaha Rakaabka Ee Ingiriiska Oo Cabsi Badani Soo Wajahday Xili Ay Sii Kordheen Diyaaradaha Aaney Cidi Wadin Ee Hawada Dalkaasi Isticmaala.
Hargeysa: Wasiirka Ciyaaraha Oo Furay Tartan Lagu Kala Saarayo Kooxaha Heerka 2-aad Iyo 3-aad →
SLT SPORTS: Horyaalka SpainOo Xilli Ciyaareedkan U Muuqda Horyaalka Ugu Adag Qaarada Yurub Iyo Qodobo Kale.
(SLT-Spain)-Horyaalka Spain ee La Ligaha ayaa la odhan jiray waa horyaal uu tartankiisu u dhexeeyo laba faras taas oo micnaheedu yahay inay Real Mardrid iyo Barcelona markasta ahaayeen labada kooxood ee horyaalka ku tartama.
Xili ciyaareedkii hore ayay wax iska badaleen horyaalka La Ligaha kadib markii kooxda Atletico Madrid ay wacdaro cusub la soo baxday isla markaan aay horyaalka ka horqaaday labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid oo soo taagan.
Haddaba xili ciyaareedkan ayuu horyaalka Spain ee La Liguhu uu galay waji cusub, waxaa xili ciyaareedkan horyaalka qaab ciyaareed fiican ku jira kooxaha Sevilla, Valencia iyo waliba Atletico Madrid oo iyadu horyaalka difaacanaysa. Waxakale oo iyaguna halkooda qaab ciyaareedkooda fiican ee joogtada ah ka sii wada Barcelona iyo Real Madrid.
Marka xusuusta dib loo celiyo horyaalka Spain ee La Ligu wuxuu sidan oo kale ahaa xili ciyaareedkii 2005/6, markaas oo ay laba dhibcood oo kaliyi ay u dhexeeyeen kooxda horyaalk ahogaaminaysay ee Osasuna oo lahayd 18 dhibcood iyo kaalinta shanaad oo ay ku jirtay Real Sociedad oo lahayd 16 dhibcood. Waxayna isku mid yihiin hadda oo ay Barcelona oo horyaalka hogaaminaysaa ay laba dhibcood ka horayso Atletico Madrid oo ku jirta kaalinta shanaad. horyaalka ayaa illaa hadda la ciyaaray sagaal kulan.
Marka la barbaro dhigo horyaalada kale ee Yurub ayuu hadda horyaalka La Liguhu u muuqdaa inuu yahay kan ugu adag isla markaana ay ku tartamayaan kooxaha ugu badan. shan kooxood ayaa u muuqda inay xili ciyaareedkan doonayaan inay hanan karaan horyaalka la ligaha.
Tusaale ahaan horyaalka Ingiriiska ayay Chelsea sagaal dhibcood ka horaysaa kooxda Arsenal oo ku jirta kaalinta shanaad halka horyaalka Talyaaniga ee Serie A da ay Juventus 7 dhibcood ka sarayso Lazio oo ku jirta kaalinta shanaad, waxayna sidoo kale Juventus 3 dhibcood oo saafi ah ka saraysaa Roma oo ku soo xigta. Ugu danayn Bayern Munich ayaa horyaalka Bundesliga ha ku haysa afar dhibcood ka saraysa saddexda koosoox eek u soo xiga halka ay shan dhibcood ka sarayso kooxda ku jirta kaalinta shanaad.
Horyaalka Spain ee La Ligha ayay xili ciyaareedkan ku tartamayaan kooxaha Barcelona, Sevilla,Real Madrid,Valencia iyo Atletico Madrid.Haddaba akhriste miyaan la odhan karin xili ciyaareedkan horyaalka La Liguhu isaga ayaa ugu adag marka la barbar dhigo dhamaan horyaalada qaarada Yurub?
Welbeck Oo Sheegay Inuu Ku Faraxsan Inuu Ka Garab Ciyaaro Sanchez.
Weerar yahanka cusub ee kooxda Arsenal Danny Welbeck ayaa amaanay saaxiibkiisa Alexis Sanchez kaas oo guul muhiim ah kooxdiisa u horseeday sabtigii.
Welbeck ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay inuu ka garab ciyaaro Sanchez oo uu ku tilmaamay inuu yahay laacib cajiib ah.
Danny ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Ka hor ciyaarta Wenger wuxu naga codsaday inaan cadaadis badan saarno Sunderland si ay u sameeyaan qaladaad badan, goolkii hore wuxuu ku yimid cadaadis aan saarnay iyo qalad ay sameeyeen”. Welbeck ayaa intaa ku daray “Taasina waxay ku tusinee sida fiican ee aan u fulinay amarka tababaraha”.
Welbeck ayaa lawaydiiyay siduu u arko inuu kagarab ciyaaro Sanchez wuxuuna ku jawaabay:
“Wa wax lagu raaxaysto inaan kagarab ciyaaro Sanchez, waa laacib cajiib ah hadii uu sidaan ku sii socdana muhiim ayeey ii tahay inaan kagarab ciyaaro”.
“Sidoo kale waan ku faraxsanahay inaan kagarab ciyaaro dhamaan laacibiinta Arsenal, dhabtii halkaan waxaan ku dhexjiraa laacibiin aad u fiican, waxaana rajaynayaa inaan guulo ku hogaamino kooxda”.
Del Piero Oo Si Waayeelnimo ah U Waaniyey Mario Balotelli
Halyaygii hore ee kooxda Juventus iyo xulka Italy, Alessandro Del Piero ayaa hadal waayeel iyo waano isugu jira u diray weeraryahanka kooxda Liverpool ee Mario Balotelli.
Mario ayaa dhibaato ka haysataa sidii uu goolal ugu dhallin lahaa naadiga uu u ciyaaro ee Liverpool horyaalka ingiriiska waxaana saaran cadaadis ba’an oo uu arintaas kala kulmayo , iyadoo sida la og yahayna aanu Super Mario ahayn shaqsi u dulqaadan kara mushkiladaha.
Del Piero ayaa u soo mariyey waanada uu ciyaaryahanka xulkiisa afka hore uga ciyaara u dirayay wargeyska caanka ah ee La Gazzetto, waxaana kamid ahaa hadalkiisa “Hadii aan isku dayo inaan waaniyo Balotelli, waxaan odhan lahaa arintu waxay ku xidhan tahay shaqsiyadiisa in ka badan inta ay ku xidhan tahay xirfadiisa”.
“Balotelli waa inuu dadka oo dhan tusaa inuu yahay qof dedaalaya iyo inuu soo bandhigo wax qabadkiisa kama danbaysta ah si uu kooxda uga caawiyo inay guul gaadho”.
“Waa inuu naftiisa la galaa loolan joogto ah, waa inuu la qaataa kooxda Liverpool tababar kasta isagoo aaminsan inay tahay fursadiisii ugu danbeysay”.
Kabtankii Koonfur Afrika Oo Toogasho Lagu Dilay
Police-ka Wadankaas ayaa Abaal Marin Lacageed u Ballan qaaday Cidii Soo Sheegta Raggii Dilkaas Geysatey
Budh-cad tiradooda saddex nin lagu sheegay ayaa toogasho ku dilay goolwadihii Kabtanka u ahaa xulka kubada cagta wadanka Koonfur Afrika iyo Naadiga Orlando Pirates, Senzo Meyiwa maalintii Axaddii.
Wararka laga hellayo ciidamada Booliska wadanka k. Afrika ayaa tilmaamay in ciyaaryahanka lagu dhex toogtay isagoo wakhtigo habeenimo ah ku sugan guriga gabadha ay isku cindan yihiin ee Vosloorus, oo ku yaala koonfurta magaalada Johannesburg.
Senzo Meyiwa oo 27 sano jir ahaa ayaa u ciyaarayay naadiga Orlando Pirates, iyo sidoo kale xulka qarankiisa oo uu markii ugu dambeysay kala qayb gallay tartankii qaramada qaarada Afrika ee Africa Cup of Nations.
Sabtidii aynu soo dhaafnay, wuxuu Meyiwa u ciyaarayay kooxdiisa, kulankii ay ugu gudbeen ciyaartii semi finalka ee South African League Cup.
Orlando Pirates ayaana ciyaartaas kaga badisay kooxda Cape Town 4-1.
Ciidmada Amaanka ayaa ballan qaaday inay abaal marin lacag ah siin doonaan cidii soo sheegta xog ku saabsan ragga falkaas ka dambeeyey.
Hadal qoraal ah oo uu soo saaray boliiska Koonfur Afrika ayay ku sheegeen in laba nin ay soo galeen guriga uu ciyaaryahanku ku sugnaa abaaro siddeedii habeenimo. Nin saddexaad oo la socdayna uu ku sugayey banaanka aqalka.
Saddexda nin ayaa la sheegay inay lug ku baxsadeen kadib markii ay xabada rideen, sida ay warfaafinta guduha qortayna waxay ahaayeen niman tuugo ah. Mid ka mid ah raggan ayaa lagu soo waramayaa inuu waydiistay telefoonka gacanta ee ciyaaryahanka.
Abaalmarin lacag ah oo dhan $14,000 (afar iyo toban kun oo dollarka Maraykanka ah) ayaa la siin doonaa qofkii keena xog ku saabsan dadka la raadinayo.
Meyiwa ayaa sida la sheegay naftu kaga baxday kadib markii isbitaalka la keenay.